UNGAYITHINTELA NJANI INTENGISO YEYOUTUBE NGOKUCOFA KANYE - ITHAMBILE
I-YouTube yeyona injini yesibini yokukhangela inezigidi zabasebenzisi abathembekileyo kwihlabathi liphela. Ungajonga ngokulula imijelo ephilayo okanye omnye umxholo wevidiyo eqongeni. Kukho into yakhe wonke umntu kuYouTube. Abasebenzisi bakhetha ukubukela umxholo kwiYouTube kunalo naliphi na elinye iqonga kuba ingumthombo wokuzonwabisa. Nangona kunjalo, into enye ecaphukisayo ngeYouTube ziintengiso ezivela ngelixa ubukele ividiyo. Siyaqonda ukuba ngoncedo lwezi ntengiso, abadali beYouTube benza imali, kodwa eyona nto isicaphukisayo linani leentengiso ekufuneka sizibonile ngelixa sibukele ividiyo. Ke ngoko, ukulungisa le ngxaki iyacaphukisa wonke umntu, sinesikhokelo ukuvimba njani iintengiso zeYouTube onokuthi uzilandele ukulahla iintengiso ezingafunekiyo kuYouTube.
Izizathu zokuVimba iiNtengiso zikaYouTube
Iindlela ezi-4 zokuThintela ukuCaphukisa iiNtengiso zikaYouTube
Indlela yoku-1: Fumana iNkulumbuso ye-YouTube
Indlela yesi-2: Sebenzisa uLwandiso lweChannel
Indlela yesi-3: Sebenzisa i-URL yokukhangela ukubhloka iintengiso
Indlela ye-4: Sebenzisa i-ViewPure iwebhusayithi
Esona sizathu sokuba abasebenzisi bakhethe ukubhloka iintengiso ezikruqulayo kwi-YouTube kukufumana okungcono kokuhambisa umxholo eqongeni ngaphandle kongenelelo. Ubude bezi ntengiso bunokuvela kwimizuzwana engama-30 ukuya kwimizuzu emi-3 , Iyakhathaza into yokuba ufumana iintengiso ezininzi kwividiyo enye.
chrome akukho zandi zilungileyo windows 10
Ukuba unqwenela ukulahla iintengiso ezikucaphukisayo ze-YouTube, emva koko unokuya Ubhaliso lwe-YouTube yeNyanga . Nge-YouTube yeNkulumbuso, ngekhe ufumane ntengiso ngelixa ubukele ividiyo . Ngapha koko, ungadlala uluhlu lwakho lokudlala lweYouTube okanye nayiphi na enye ividiyo ngasemva ngeprimiyamu yeYouTube.
Ngapha koko, ufumana amava athambileyo kunye nezinto ezininzi ezinje ngomculo we-YouTube weprimiyamu kunye nokudlala. Unenketho yokukhuphela ifayile yakhointandokaziIividiyo zeYouTube.
Izicwangciso zokubhaliselwa kwepremiyamu zifikeleleka kakhulu, kwaye iqala ukusuka Rs129 / ngenyanga . Unokukhetha isilingo sasimahla . Ngeenkcukacha zamaxabiso, unokucofa Apha .
khuphela ukuqala kwemenyu yokusombulula iingxaki kwiwindows 10
Zininzi izandiso zomntu wesithathu ezikhoyo kwisikhangeli se-chrome ongasisebenzisa ukuvimba iintengiso kwiividiyo zeYouTube. Olunye ulwandiso olunje Vimba yeYouTube onokuyifaka kwivenkile yewebhu ye-Chrome.
1. Vula ifayile yakho Isikhangeli se-Chrome kunye nentloko kwi Ivenkile yewebhu ye-Chrome .
2. Chwetheza Vimba yeYouTube kwibar yokukhangela kwaye ucofe ulwandiso kwiziphumo zophando.
3. Cofa apha Yongeza kwiChannel .
4. Cofa apha Yongeza ulwandiso ukuyifaka.
5. Emva kokufaka ngempumelelo ulwandiso, ungayicofa ecaleni kwe icon yakho yolwandiso ukufikelela ngokulula kuyo ukuvimba iintengiso kwiYouTube .
6. Ngoku, dlala ividiyo yeYouTube .
7. Okokugqibela, cofa apha ulwandiso ukusuka kwikona ephezulu ngasekunene kwesikrini sewindows kwaye vula i toggle on yokuthintela.
Umrhwebi wexesha lokubaleka usebenzisa i-cpu ephezulu
Yiyo leyo; Olu lwandiso lwe-Chrome luya kuthintela iintengiso ezikucaphukisayo, kwaye ungabukela iividiyo ngaphandle kongenelelo.
Funda kwakhona: Ukwazi njani ukuba umntu othile uthintele inombolo yakho kwi-Android
Icebo lokuzama kunye nokuvavanya ukubhloka iintengiso ze-YouTube kukukhohlisa kwe-URL. Eli qhinga libandakanya ukongeza isimboli yexesha kwidilesi ye-URL yevidiyo oyibukeleyo kwi-YouTube. Olu luhlu olunomtsalane onokulusebenzisa ukuba uyazibuza Ungazivimba njani iintengiso zeYouTube ngobuqili obulula be-URL. Sebenzisa le mfumba, unokulandela inkqubo engezantsi.
Ngokwesiqhelo, idilesi ye-URL yayo nayiphi na into oyibukeleyo kwi-YouTube ibonakala https://www.youtube.com/watch? […]
Into ekufuneka uyenzile kukongeza ixesha ( . Isimboli kanye emva kwe-youtube.com.
Idilesi yakho entsha ye-URL iya kujongeka ngoluhlobo: https://www.youtube.com ./watch? […]
Xa usongeza isimboli yexesha kwidilesi ye-URL yevidiyo onqwenela ukuyibukela, awusayi kuphinda ufumane naziphi na iintengiso ezicaphukisayo ngelixa ubukeleividiyo. Nangona kunjalo, uya kuba nakho ukusebenzisa le ngxaki kwi-desktop ye-YouTube. Ukuba unqwenela ukusebenzisa i-URL yomnxeba kwifowuni yakho, Kuya kufuneka wenze ukhetho lwesiza sedesktop kwisikhangeli sakho . Ukwenza indawo yedesktop, vula Google Chrome> cofa amachaphaza amathathu athe nkqo kwikona ephezulu ngasekunene kwesikrini> Khetha indawo yeDesktop.
Indlela yesi-4: Sebenzisa Jonga ukucoceka iwebhusayithi
Enye indlela onokuyisebenzisa ukuba awuyaziukuvimba njani iintengiso zeYouTube,Kukusebenzisa i Jonga ukucoceka iwebhusayithi . Le webhusayithi ivumela abasebenzisi ukuba babukele ngokulula nayiphi na ividiyo ye-YouTube ngaphandle kokuphazamiseka okanye iintengiso phakathi . Landela la manyathelo ukusebenzisa iJonga ukucocekaiwebhusayithi.
1. Vula isikhangeli sakho kunye nentloko kwi JongaPurKwayeiwebhusayithi .
2. Vula Youtube kwaye kopisha i-URL yevidiyo onqwenela ukuyibuka ngaphandle kwentengiso.
Iimeyile ezibukhoma kwi-imeyile aziyi kuvula i-windows 10
3. Ngoku, Cola i-URL yevidiyo ye-YouTube kwibar yokukhangela kwiJonga ukucocekaiwebhusayithi ethi ' Ngenisa i-URL yeYouTube okanye igama lokukhangela . ’
4. Ekugqibeleni, thepha Hlambulula kwaye ubukele ividiyo yakho ngaphandle kwentengiso.
Imibuzo ebuzwa qho (Ii-FAQ)
Q1. Ngaba kusemthethweni ukuvimba iintengiso ze-YouTube?
Akukho semthethweni ukuvimba iintengiso zeYouTube, kwaye abasebenzisi banokusebenzisa izandiso zokuthintela intengiso ukunqanda ukubona iintengiso phakathi kweevidiyo zeYouTube. Kodwa, abasebenzisi abanalo ilungelo lokuphazamisa ilungelo lomshicileli lokusebenzela okanye lokuthintela ukufikelela kumxholo welungelo lokushicilela eqongeni.
Umbuzo Ndizibamba njani iintengiso zeYouTube kwiChannel?
Ukuvimba iintengiso zeYouTube kwisikhangeli seChannel, ungasebenzisa ulwandiso lokuvimba intengiso olubizwa ' Vimba yeYouTube ’Okanye naluphi na olunye ulwandiso onokulufumana kwivenkile yewebhu ye-Chrome. Ungasebenzisa kwakhona i-URL ye-hack ukuvimba iintengiso ze-YouTube.
Ungayithintela njani kwaye uyivulele iwebhusayithi kwiGoogle Chrome
Ungazenza njani iifowuni zeVidiyo kwiTelegram
Ungamisa njani iiNtengiso ezi-pop-up kwi-Android
Siyathemba isikhokelo sethu Ungazivimba njani iintengiso zeYouTube yayiluncedo, kwaye wakwazi ukulahla iintengiso ezicaphukisayo kwiividiyo zeYouTube. Ukuba ulithandile inqaku, masazise kwizimvo ezingezantsi.
umda weMicrosoft wanyamalala windows 10
irql ayikho ngaphantsi okanye ilingana neblue screen
Ngaba i-adblock ayisebenzi kwi-youtube kwakhona
windows 10 ukuphuculwa okuncamathele kuma-99 ukulungisa